Maxa xalay ilaa saka Xamar ka dhacay? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxa xalay ilaa saka Xamar ka dhacay?
Keydmedia Online waxa ay idiin soo koobeysaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Xalay ilaa saaka ka dhacay Magaalada Mugdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Musharixiinta ayaa hore u iclaamiyay bannaan-bax ballaaran oo qorshuhu ahaa inuu maanta ka dhaco taallada Daljirka Dahsoon ee Magalada Muqdisho.
Madaxweynayashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dagay Huteelka Maa’iddo Ex Naasa-hablood oo u dhow taallada Daljirka oo ballantu ahayd in la isugu yimaado.
Xalay fiidkii ciidamo uu hor kacayay Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad ‘Indhacadde’ ayaa la wareegay amniga Taallada Daljirka, Jananka oo warbaahinta la hadlay ayaana sheegay in dalka aysan ka jirin wax maamul Dowladeed ah.
Madaxweynaha ay muddadu ka dhamaatay ee Farmaajo ayaa xalay amray in la weeraryo Madaxweynayashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed Huteel-ka ay ka dagan yihiin Muqdisho.
Guud ahaan Magaalada Muqdisho ayuu Rajiimka waqtigiisu dhamaaday ku soo daadiyay askar Fahad iyo Farmaajo ka amar qaata, waxaana dadka Shacbaka ah ku soo waabariisteen ciidan wata qoryo amaanku u furan yahay oo taagan jidadka iyo guryaha iriddooda.
Guud ahaan ciidamada Farmaajo soo diray waxa diideen isku socodka dadweynaha , mana jirto goob gancsi oo saaka la furay magaalada Muqdisho.
Madaxdii iyo Shacabkii uu qorshahoodu ahaa in ay aragtidooda ku soo bandhigaan Daljirka Dahsoon ayay saaka u suuroobi weysay, jidadka xirar awgood.
Qeyb ka mid ah Siyaasiyiinta Mucaaradka oo ay hoggaaminayaan Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Cabdiraxmaaan Cabdishakuur Warsame iyo dad shacab ah ayaa degmada Wadajir ka billaabay mudaharaad xooggan, kaas oo si dag-dag ah isu qabsaday una xoogeystay.
Ciidamada uu soo abaabulay Farmaajo ayaa rasaas kala hor tagay Mudaharaadka waxayna khatar galiyeen nolosha Madaxdii iyo shacabkii ka qeyb galayay dibad-baxa.
Qaramada Midoobay ayaa ka hadashay xaaladda cakiran ee uu galay dalka Soomaaliya, waxayna ku baaqeen in loo ja joojiyo isku dhacyada ka socda Muqdisho kadib markii is hor istaag lagu sameeyay shacabkii bannaan-baxa ka dhigi lahaa Magaalada Muqdisho ee kasoo horjeeday dowladda uu hoggaamiyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday.
Musharixiinta Madaxweynaha ee Mucaaradka ah ayaa sheegay in Farmaajo uu yahay dhiigya-cab, kali-talis ah ayna kula xisaabtami doonaan wixii uu sameeyay xalay ilaa sakay.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan iyo Shariif oo xalay ilaa maanta ku go’doonsanaa Huteel Maa’idda ayaa kadib salaaddi jimacaha ka soo baxay Hiteelka.
Ra’iisul Wasaare Rooble ‘Rogane’ oo warbaahinta la hadlay ayaa taageeray go’aankii lagu baajiyay bannaan-bixii maanta, wuxuu Jeneraal Indhacadde ku eedeeyay in weeraray ciidamada dowladda, halka uusan soo hadal qaadin siyaasiyiinta uu heyb ahaan matalo ee dhibaatada xooggan loo geystay xalay iyo saaka.
Wixii war ah oo ku saabsan arrimahaan kala soco Keydmedia Online.